मालपोत प्रमुखकै मिलेमतोमा १० करोडको जग्गा बिक्री ! - Everest Dainik - News from Nepal
मालपोत प्रमुखकै मिलेमतोमा १० करोडको जग्गा बिक्री !
काठमाडौं, असोज १४ । मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुखकै मिलेमतोमा धनीलाई थाहै नदिई करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा बिक्री भएको खुलेको छ । प्रहरीले मालपोत प्रमुखसहित थप चार कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख (उपसचिव) कमलप्रसाद तिमल्सिनालाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । उनीसहित नासु चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र कार्यालय सहयोगीद्वय मुकुन्द धिताल र रमेश महजर्नलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले पक्राउ गरेको हो । चाबहिल मालपोतका थप चार कर्मचारी यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
उनीहरूको बयानमा कार्यालय प्रमुखकै संलग्नता खुलेको हो । यसअघि पक्राउ परेका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख तिमल्सिनाको निर्देशनअनुसार नै जग्गा पासको काम भएको उनीहरूको बयान छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले जग्गा धनीका फोटो परिवर्तनमा सहयोग गरेको आशंका गरिएको छ । व्यवसायी चन्दनकृष्ण कायस्थको बूढानीलकण्ठ–१६ स्थित ४० आना जग्गा एक महिनाअघि उनलाई थाहा नै नदिई नक्कली कागजपत्रका आधारमा बिक्री भएको थियो ।
अभियुक्तको संख्या १३ पुग्यो
जग्गा बिक्री प्रकरणमा अभियुक्तको संख्या १३ पुगेको छ । यसअघि नौजना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले मालपोत कार्यालय चाबहिलका मालपोत अधिकृत खगेन्द्र अर्याल तथा नासुहरू जमुनाकुमारी श्रेष्ठ, रञ्जन खरेल र रघुनाथ तिमल्सिनालाई प्रहरीले दुई साताअघि पक्राउ गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस मालपोत कार्यालयको मनपरी, पुँजीगत लाभकर उठाउँदा करोडौं राजस्व छुट
मालपोत कार्यालयमा रहने स्रेस्तामै उनको फोटो उप्काएर अर्का व्यक्तिको फोटो राखी त्यही आधारमा नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा बिक्री भएको थियो । कायस्थको जग्गा श्रीकृष्ण देवकोटा र धुव्रप्रसाद भट्टराईको नाममा नामसारी भएको थियो । उनीहरू पनि हिरासतमै छन् । गिरोहका श्रीकृष्ण बडुवाल र सानुभाइ श्रेष्ठलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: malpot, कमलप्रसाद तिमल्सिना, मालपोत कार्यालय चाबहिल